Injongo yethu kukubonelela ngenani elikhulu leendawo ezikhethiweyo zemoto ngamaxabiso afikelelekayo, ezidlula ubulindele. Sihlala sizama ukubonelela abathengi ngonxibelelwano olusebenzayo nolunobuhlobo, ukuthengiselana okugudileyo kunye nokuhanjiswa okukhawulezayo.
Injongo yethu kukubonelela ngenani elikhulu leendawo ezikhethiweyo zemoto ngamaxabiso afikelelekayo, ezidlula ubulindele. Sihlala sizama ukubonelela abathengi ngonxibelelwano olusebenzayo nolunobuhlobo, ukuthengiselana okugudileyo kunye nokuhanjiswa okukhawulezayo. Sinikezela ngeendawo ezahlukeneyo zemoto kwiimveliso ezininzi kunye neemodeli kwimarike, ezinje ngezitulo ezikumgangatho ophezulu kunye nekhava yemoto, iipads ezikhuselayo zeenyawo, amavili okuqhuba ngesikhumba, njalo njalo. Imisebenzi kunye neenkcukacha zibandakanya iibhakethi ezi-2 zangaphambili, i-1 yebhentshi i-cover kunye ne-5 i-pillow cover cover, kunye ne-top of the covers ine-Velcro yokuvula, enokukunceda ukuba ubeke imithwalo yokubuyisela kalula. Ilaphu lethu letafile lelaphu liziintshi ezingama-52 ubude. Izinto eziphathekayo zenziwe ngelaphu elihlala ixesha elide, elikhululekile kwaye eliphefumulayo elikumgangatho ophezulu-elula ukucoceka, ukuhlamba umatshini kunye nomoya-moya. Isicelo esiqhelekileyo esilungiselelwe ukuhlalisa izihlalo zemveli kunye nezifudumezi zifanelekile phantse zonke izihlalo (iimoto, iilori, iiveni kunye neeSUV). Le nkqubo ayihambelani nee-airbags zecala langaphambili kunye nomsebenzi wokwahlula ngasemva. Isitayela sokukhwela kunye noyilo lwethu olunesibindi. Imigca engqindilili ebethayo ngokuqinisekileyo iya kutsala ingqalelo. Kukho imibala emininzi ehambelana nayo nayiphi na ingaphakathi. Ilaphu lethu elikumgangatho ophezulu linomqamelo we-foam oyi-3mm emva kwawo, onokususa ubushushu kwaye ugcine upholile kwaye ukhululekile nakwelona qondo lobushushu lishushu.
Ipakethe ibandakanya: 2 Amagquma ebhakethi angaphambili, ibhentshi e-1 yokwahlula ngasemva, ii-Headrest covers ezi-5.
Izinto: Ilaphu leFlat / iPolyester.polyester enemigca yeepaneli zoyilo Ingcebiso yokucoca: Umatshini unokuhlanjwa, wome umoya.
Ngaphambili: I-airbag esecaleni iyahambelana - ivavanywa ngokusemthethweni - ubuchule obukhethekileyo bokuthunga buvumela i-airbag ukuba ivuthe xa ifuthe. Ngasemva kwesitulo sangaphambili senziwe ngelaphu elolulayo elomeleleyo elinepokotho yokuvula yokugcina.; Ukuvuleka kwevelcro efihliweyo kunye neentambo ezilungelelanisiweyo zenza ufakelo, ukususwa, kunye nokuncamathisela kube yimpepho
Thintela amabala-Ezi zitulo zokuhlala zifanelekile kwimoto yakho entsha, nakwimoto yakho entsha. Izigqubuthelo zezihlalo zeemoto zethu zinokuthintela ukuchitheka okunokwenzeka kunye namabala ngaphakathi emotweni. Izinto eziphefumlayo-Sisebenzisa izinto ezikhethiweyo ezikhethekileyo ukufumana * intuthuzelo enkulu ngexesha lokuhamba yonke imihla. Umaleko wangaphandle wepolyester okumgangatho ophezulu ubonelela ngendawo yokuphefumla eyandisiweyo ukukugcina upholile kwaye ukhululekile ngelixa uqhuba. Uyilo olusefashonini-yenza imoto yakho ibonakale intsha kwaye ibuye. Le seti igcweleyo yezihlalo zokuhlala inoyilo olunemibala emibini enesitayile kunye nokuhombisa okuthungayo, okwenza kube lula ukongeza umbala ongaphakathi ngaphakathi kwakho. Kulula ukuyifaka-utyalo-mali lwakho lwemoto entsha lusenokukhawuleza *. Faka isigqubuthelo sesihlalo sangaphambili kunye ne-headrest cover ngokwenkqubo yethu yokufaka i-3-step elula. Ukusebenziseka jikelele- uyilo lwethu lokuvala izitulo lulungele izithuthi ezininzi, kubandakanya iimoto, iilori, iiveni kunye neeSUV. Nceda ujonge imifanekiso yethu yemveliso ngemizekelo yezinto ezincedisayo. Kungathatha umsebenzi owongezelelweyo ukwenza "okugqibeleleyo" ukulingana.
Ngaphambili: UmGangatho oLungileyo weBondi yeMoto-I-Automobile Electrostatic Film Side Block – Yonwabele
Okulandelayo: PEVA Cotton Car Snow Shield Sunshade Thickened Front Windshield Snow Shield
Ikhaphethi yeMat yemoto
Ikhaphethi yoMgangatho weCarpet Mat
Iimethi zoMgangatho wekhaphethi
Umgangatho ophezulu we-Sunshade Manufactory